ကလေးလေးတွေ တရေးအိပ်ချိန် | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးလေးတွေ တရေးအိပ်ချိန်ဟာ မေမေတို့တွေအတွက်ပါ အနားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကို အိပ်အောင်လုပ်ရတာကတော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
>> တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်အိပ်သင့်သလဲ?
မွေးကင်းစလေးတွေအနေနဲ့ကတော့ အိပ်လိုက်နို့စို့လိုက်ပါပဲ။ အိမ်ချိန်အတိအကျရှိဖို့က အချိန်ယူရပါတယ်။ ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ တရေးအိပ်ချိန်လေးတွေဟာ ပိုရှည်လာပြီး ခန့်မှန်းရလွယ်ကူလာပါတယ်။ ဥပမာ -
● ၄ လကနေ ၁ နှစ်အတွင်းမှာ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်လောက် တရေးအိပ်တတ်ပြီး မနက်ပိုင်းတစ်ခါ ညနေပိုင်းတစ်ခါ အိပ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်း တစ်ရေးအိပ်ချိန် စုစုပေါင်း ၃ နာရီလောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိတတ်ပါတယ်။
● ၁နှစ်အထက် ကလေးတွေမှာတော့ နေ့ခင်းဘက်လောက်ပဲ တရေးအိပ်ပါတော့တယ်။ တစ်ခါအိပ်ရင် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီလောက် ကြာတတ်ပါတယ်။ အသက် ၃ နှစ် ဒါမှမဟုတ် ၅ နှစ်လောက်အထိကို ဒီလိုပုံစံမျိုး အိပ်တတ်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွာခြားချက်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
>> ကလေးကို ဘယ်လိုသိပ်မလဲ?
အိပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာအောင် တိတ်ဆိတ်ပြီး အလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာမှာ သက်သောင့်သက်သာ အနေအထားနဲ့သိပ်ပါ။
ကလေးလေးမျက်ခွံတွေ ငိုက်လာပြီ၊ မျက်လုံးတွေ ပွတ်လာပြီ၊ ဂျီစကျလာပြီဆိုရင် စသိပ်ပါ။ ဒါဟာ အိပ်ချင်တာကိုပြတဲ့ လက္ခဏာပါ။ ဒီအတိုင်း ကြာသွားရင် ကလေးက ပိုစိတ်တိုလာပြီး သိပ်ရခက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးကိုချီပြီး၊ ပုခက်လွှဲပြီး၊ နို့တိုက်ပြီး သိပ်တာမျိုး ရှောင်ပါ။
ကလေးကို ပက်လက်ပဲသိပ်ပါ။ ကလေးအိပ်တဲ့နေရာမှာ စောင်တွေ၊ အရုပ်တွေကို မထားပါနဲ့။ မတော်တဆ ပိနေနိုင်လို့ပါ။
နေ့တိုင်း ဒီအချိန် တရေးသိပ်မယ်ဆိုရင် မပျက်မကွက် လုပ်ပါ။
>> ကလေးက လက်ပေါ်ကချပြီး သိပ်တာနဲ့ငိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒါဟာ ကလေး တော်တော်များများမှာ ဖြစ်နေကျပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခဏကြာရင် သူ့ဘာသာ တိတ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲလိုမတိတ်ဘဲ ငိုတာကြာလာရင် သေးစိုနေလား၊ အကောင်ကိုက်တာလား စတာတွေကို စစ်ဆေးကြည့်ပြီး သီချင်းဆိုပြတာမျိုး လုပ်ပါ။ ပြီးရင် သူ့ဘာသာ ပြန်အိပ်ပျော်အောင် ထားပါ။
ကလေးက သိပ်ပြီး မကြာခင်မှာ နိုးလာတယ်၊ တခြားထူးထူးခြားခြားလည်း မရှိဘူးဆို ဒီတိုင်းလေး ခဏပုတ်ပေး၊ နို့လေး ပြန်တိုက်ပေးပြီး သူ့ဘာသာ ပြန်အိပ်ပျော်အောင် ထားလိုက်ပါ။
>> ကလေးကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ အိပ်ခိုင်းသင့်လဲ?
ဒါကတော့ ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်လားပေါ် မူတည်ပါတယ်။
တချို့ကလေးတွေမှာ နေ့နဲ့ည မှားနေတာမျိုး၊ နေ့ဘက်မှာ ပိုအိပ်နေတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ နေ့ခင်းဘက်တွေမှာ ၃ နာရီ၊ ၄နာရီလောက်ထက်ပိုပြီး ပေးမအိပ်သင့်ပါဘူး။ ညနေခင်းတွေမှာ အကြာကြီးအိပ်ထားရင် ညဘက် အိပ်ပျော်ဖို့ ပိုခက်ပါတယ်။
>> ကလေးက ရုတ်တရက်ကြီး တရေးအိပ်ဖို့ သိပ်လို့မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
တချို့ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ ကလေးကြီးတွေမှာ ဒီလိုအချိန်မျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ညဘက်အိပ်ရာဝင်ချိန်ကို နည်းနည်းရှေ့တိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးတာမျိုးက နေ့ခင်းဘက် တရေးတမောအိပ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေကို တရေးသိပ်ရတာဟာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အရမ်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ကလေးလေး ပင်ပန်းရင်၊ အိပ်ချင်ရင်ပြတဲ့ လက္ခဏာလေးတွေကို ဂရုစိုက်ကြည့်ပြီး နေ့တိုင်းပုံမှန် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကေလးေလးေတြ တေရးအိပ္ခ်ိန္ဟာ ေမေမတို႔ေတြအတြက္ပါ အနားရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ကို အိပ္ေအာင္လုပ္ရတာကေတာ့ မလြယ္ကူလွပါဘူး။
>> တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္အိပ္သင့္သလဲ?
ေမြးကင္းစေလးေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အိပ္လိုက္ႏို႔စို႔လိုက္ပါပဲ။ အိမ္ခ်ိန္အတိအက်ရွိဖို႔က အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ႀကီးလာတဲ့အခါမွာေတာ့ တေရးအိပ္ခ်ိန္ေလးေတြဟာ ပိုရွည္လာၿပီး ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူလာပါတယ္။ ဥပမာ -
● ၄ လကေန ၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ တေရးအိပ္တတ္ၿပီး မနက္ပိုင္းတစ္ခါ ညေနပိုင္းတစ္ခါ အိပ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တာအတြင္း တစ္ေရးအိပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃ နာရီေလာက္ေတာ့ အနည္းဆုံးရွိတတ္ပါတယ္။
● ၁ႏွစ္အထက္ ကေလးေတြမွာေတာ့ ေန႔ခင္းဘက္ေလာက္ပဲ တေရးအိပ္ပါေတာ့တယ္။ တစ္ခါအိပ္ရင္ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီေလာက္ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အသက္ ၃ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ၅ ႏွစ္ေလာက္အထိကို ဒီလိုပုံစံမ်ိဳး အိပ္တတ္ပါတယ္။
ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
>> ကေလးကို ဘယ္လိုသိပ္မလဲ?
အိပ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာေအာင္ တိတ္ဆိတ္ၿပီး အလင္းေရာင္မရွိတဲ့ေနရာမွာ သက္ေသာင့္သက္သာ အေနအထားနဲ႔သိပ္ပါ။
ကေလးေလးမ်က္ခြံေတြ ငိုက္လာၿပီ၊ မ်က္လုံးေတြ ပြတ္လာၿပီ၊ ဂ်ီစက်လာၿပီဆိုရင္ စသိပ္ပါ။ ဒါဟာ အိပ္ခ်င္တာကိုျပတဲ့ လကၡဏာပါ။ ဒီအတိုင္း ၾကာသြားရင္ ကေလးက ပိုစိတ္တိုလာၿပီး သိပ္ရခက္သြားပါလိမ့္မယ္။
ကေလးကိုခ်ီၿပီး၊ ပုခက္လႊဲၿပီး၊ ႏို႔တိုက္ၿပီး သိပ္တာမ်ိဳး ေရွာင္ပါ။
ကေလးကို ပက္လက္ပဲသိပ္ပါ။ ကေလးအိပ္တဲ့ေနရာမွာ ေစာင္ေတြ၊ အ႐ုပ္ေတြကို မထားပါနဲ႔။ မေတာ္တဆ ပိေနႏိုင္လို႔ပါ။
ေန႔တိုင္း ဒီအခ်ိန္ တေရးသိပ္မယ္ဆိုရင္ မပ်က္မကြက္ လုပ္ပါ။
>> ကေလးက လက္ေပၚကခ်ၿပီး သိပ္တာနဲ႔ငိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
ဒါဟာ ကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေနက်ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခဏၾကာရင္ သူ႔ဘာသာ တိတ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲလိုမတိတ္ဘဲ ငိုတာၾကာလာရင္ ေသးစိုေနလား၊ အေကာင္ကိုက္တာလား စတာေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး သီခ်င္းဆိုျပတာမ်ိဳး လုပ္ပါ။ ၿပီးရင္ သူ႔ဘာသာ ျပန္အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ထားပါ။
ကေလးက သိပ္ၿပီး မၾကာခင္မွာ ႏိုးလာတယ္၊ တျခားထူးထူးျခားျခားလည္း မရွိဘူးဆို ဒီတိုင္းေလး ခဏပုတ္ေပး၊ ႏို႔ေလး ျပန္တိုက္ေပးၿပီး သူ႔ဘာသာ ျပန္အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ထားလိုက္ပါ။
>> ကေလးကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အိပ္ခိုင္းသင့္လဲ?
ဒါကေတာ့ ညဘက္မွာ ေကာင္းေကာင္းအိပ္လားေပၚ မူတည္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ကေလးေတြမွာ ေန႔နဲ႔ည မွားေနတာမ်ိဳး၊ ေန႔ဘက္မွာ ပိုအိပ္ေနတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါ ေန႔ခင္းဘက္ေတြမွာ ၃ နာရီ၊ ၄နာရီေလာက္ထက္ပိုၿပီး ေပးမအိပ္သင့္ပါဘူး။ ညေနခင္းေတြမွာ အၾကာႀကီးအိပ္ထားရင္ ညဘက္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ပိုခက္ပါတယ္။
>> ကေလးက ႐ုတ္တရက္ႀကီး တေရးအိပ္ဖို႔ သိပ္လို႔မရေတာ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
တခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေလးေတြနဲ႔ ကေလးႀကီးေတြမွာ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ညဘက္အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ကို နည္းနည္းေရွ႕တိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆုတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးက ေန႔ခင္းဘက္ တေရးတေမာအိပ္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။
ကေလးေတြကို တေရးသိပ္ရတာဟာ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အရမ္းစိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ ကေလးေလး ပင္ပန္းရင္၊ အိပ္ခ်င္ရင္ျပတဲ့ လကၡဏာေလးေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ၿပီး ေန႔တိုင္းပုံမွန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
ကလေးတို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး နဲ့ စိတ်ခံစားမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက်
၂၅.၁.၂ဝ၂၁ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
● ကလေးကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စံပြနမူနာဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ မိဘဆိုတာ ကလေးရဲ့လက်ဦးဆရာပါပဲ။
● ကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ အမူအကျင့်တွေကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေပါ။ ဒီလိုသတိထားမိနေခြင်းက ကလေးနဲ့မေမေဖေဖေတို့ကြား ယုံကြည်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
● အဖွင့်မေးခွန်းကို မေးပေးပါ။ ဥပမာ...
အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့်နည်းများ
၂၁.၁.၂ဝ၂၁ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
မွေးစကနေ ခြောက်လအတွင်း ချောင်းခြောက်ဆိုးနေပြီး နေရခက်နေတဲ့ သားသားမီးမီးအတွက် အကောင်းဆုံး ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကတော့ မိခင်နို့ပါတဲ့။ မိခင်နို့လည်း တိုက်သလို ချစ်စရာ့အရွယ်လေးတွေရဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် မိမိဘာသာ အလွယ်တကူဖော်စပ်လို့ရတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက် အစွမ်းထက် အိမ်တွင်းဆေးဝါးလေးတွေအကြောင်းလည်း သ...